Rallye Dakar 2018 : niala an-daharana i André Villas-Boas | NewsMada
Rallye Dakar 2018 : niala an-daharana i André Villas-Boas
Par Taratra sur 12/01/2018
Anisan’ireo nifaninana tamin’ny andiany faha-40 amin’ny Rallye Dakar, ilay mpanazatra baolina kitra, mizaka ny zom-pirenena Portioge, André Villas-Boas. Teo amin’ny sokajy fiarakodia no nifaninanany tamin’izany. Voatery niala an-daharana nefa izy ny talata lasa teo, nandritra ny fanatanterahana ny dingana fahefatra, notanterahina manodidina ny San Juan de Marcona ao Pérou. Voalazan’ny Toyota Overdrive, ekipa misy azy fa ny loza nahazo ny fiarakodia nentiny ka naharatran’ny lamosiny ny antony nialany ka tsy nahafahany nanohy ny «rallye», intsony.
Tsiahivina fa mpanazatra ny ekipan’ny Chelsea sy Tottenham, ingahy André Villas-Boas, fahiny. Tsy manana klioba intsony kosa izy amin’izao izy 40 taona izao. Voalohany teo amin’ny fiainany, ny nandraisany anjara, amin’ny fanatanjahantena mekanika.
Ankoatra izay, anisan’ny nanamarika ity Rallye Dakar ity ihany koa ny fahavoazan’ilay frantsay Sébastien Loeb, teo amin’ny dingana fahadimy, nampitohy an’ny San Juan de Marcona amin’ny Arequipa, ao Pérou, ny alarobia lasa teo. Nihitsoka efa ho 30 mn tao anatin’ny fasika mivangongo mantsy ny fiara nentiny ary niafara tamin’ny fivadihany mihitsy, naharatran’i Daniel Elena, mpanamory mpanampy azy.
Mitarika eo amin’ny moto i Adrien Van Beveren
Raha ny vokatra teo amin’ny dingana fahadimy, notontosaina ny alarobia lasa teo, mbola mitarika eo amin’ny filaharana ankapobeny, eo amin’ny sokajy fiarakodia, i Stéphane Peterhansel, arahin’i Carlos Sainz . Eo amin’ny moto indray, mitarika hatrany Adrien Van Beveren. Eo amin’ny laharana faharoa, Kevin Benavides ary fahatelo, Matthias Walkner.
Hiala sasatra ireo mpifaninana, amin’ity andro zoma ity. Hitohy amin’ny fanatanterahana ny dingana fahafito izany rahampitso asabotsy, ka hiainga ao La Paz ireo mpifaninana rehetra ary hihazo an’i Uyuni.
Tsiahivina fa amin’ny asabotsy 20 janoary vao hifarana ity andiany faha-40 amin’ny Rallye Dakar 2018 ity.